အမြင့်ဆုံးအသံအရည်အသွေးဖြင့်တေးဂီတကိုဒေါင်းလုပ်လုပ်နည်း။ FLAC !! | Androidsis
Francisco Ruiz | | အခမဲ့ဂီတ, NOTICIAS, Android cheat, လဲ tutorial
ကျွန်ုပ်တို့လွှင့်ထုတ်သည့်အချိန်တွင်မည်သူတစ် ဦး တစ်ယောက်မျှသူတို့၏စမတ်ဖုန်းတွင်ဂီတကိုသယ်ဆောင်နိုင်ခြင်းမရှိသော်လည်းအံ့သြစရာကောင်းလောက်အောင်ကောင်းမွန်သောဒေတာဆက်သွယ်မှုများမရှိခြင်းကြောင့်အသုံးပြုသူများစွာရှိနေသေးသည်။ လိုအပ်တယ် ဂီတကိုဒေါင်းလုပ်လုပ်ရန်အက်ပ်များ သို့မဟုတ်သင်၏ Android သို့တေးဂီတကိုတိုက်ရိုက်ဒေါင်းလုပ်ဆွဲရန်တစ်ခုခုသို့မဟုတ်သင်မိုဘိုင်းအခကြေးငွေမသုံးဘဲနားထောင်နိုင်သည်.
သူတို့အားလုံးအတွက်နှင့်ကိုယ်ပိုင်အသံအရည်အသွေးအမြင့်ဆုံးရှိသည့်မိမိတို့ကိုယ်ပိုင်ဂီတစုဆောင်းမှုကိုနှစ်သက်လိုသူများအတွက်ယနေ့ကျွန်ုပ်သည်ဒီဗီဒီယိုပို့စ်ကိုကျွန်ုပ်တစ်ဆင့်ချင်းရှင်းပြပေးသောဗွီဒီယိုပို့ဆောင်ခြင်းကိုယူဆောင်လာသည်။ တေးဂီတကိုအမြင့်ဆုံးဆုံးရှုံးမှုမရှိသောအရည်အသွေး (သို့) FLAC ပုံစံဖြင့်မည်သို့ဒေါင်းလုပ်ဆွဲရမည်နည်း.
အဆိုပါအရာတကယ်ထက်မပိုနက်နဲသောအရာတခုကိုရှိပါတယ် ဗီယက်နမ်ဇာစ်မြစ်၏ဤဝဘ်ကိုရိုက်ထည့်ပါ y FLAC format ဖြင့်အမြင့်ဆုံးအသံအရည်အသွေးဖြင့်သင်ဒေါင်းလုပ်လုပ်ရန်စိတ်ဝင်စားသောဂီတကိုစတင်ရှာဖွေပါ။ ကောင်းပြီ, Lossless audio အရည်အသွေးရှိ FLAC အမျိုးအစားသို့မဟုတ်စာမျက်နှာ၏အကျိုးအမြတ်မရှိဘဲမျှဝေထားသောအခင်းအကျင်းများအတွက်ကျွန်ုပ်တို့ရွေးချယ်ထားသောအခွင့်အလမ်းများထဲမှသင်နှင့်အသင့်တော်ဆုံးပုံစံနှင့်အရည်အသွေး။ Chiansenhac.
ငါကတည်းကပုဂ္ဂိုလ်ရေးအရချစ်ကြတဲ့စာမျက်နှာ ကျွန်ုပ်ရှာနေသည့်မဟုတ်သည့်ဖိုင်များခိုးယူခြင်းဖြင့်ကျွန်ုပ်ကိုလှည့်စားရန်မကြိုးစားပါ ၎င်းတွင်ထည့်သွင်းထားသည့်ကြော်ငြာသည်ခံနိုင်ရည်ရှိခြင်းနှင့်ချုပ်တည်းခြင်းထက်မကပါ။
ထို့အပြင်သီချင်းတစ်ပုဒ်ကိုဒေါင်းလုပ်ဆွဲရန်လင့်ခ်ကိုနှိပ်သည့်အခါကျွန်ုပ်တို့တွေ့ရှိသည် ဒေါင်းလုပ်ဆွဲလုနီးပါးအလိုအလျောက်စတင်ဘယ်မှာ cheat သို့မဟုတ်ကတ်ထူပြားမပါဘဲတိုက်ရိုက် link ကို.
ဒါကိုနည်းနည်းလေးမှမထည့်ဘူး ကျနော်တို့အတော်လေးကြီးမားတဲ့ဂီတ catalog တွေ့ရှိခဲ့သည်အထူးသဖြင့်ဂီတစျေးကွက်နှင့်ပတ်သက်သည့်နောက်ဆုံးသတင်းများနှင့်စီးပွားဖြစ်တေးဂီတသီချင်းများနှင့် ပတ်သက်၍ FLAC သို့မဟုတ် Lossless အရည်အသွေးဖြင့်ဂီတကိုဒေါင်းလုပ်လုပ်ရန်အကောင်းဆုံးဝက်ဘ်ဆိုက်တစ်ခုဖြစ်သည်ဟုကျွန်ုပ်တို့ပြောနိုင်သည်။
ဤလိုင်းများအထက်တွင်သာကျန်ခဲ့သောဗွီဒီယိုတွင်ဝဗ်သည်မည်မျှကောင်းမွန်စွာလုပ်ဆောင်နေသည်ကိုသင့်အားပြသည် တေးဂီတကို FLAC format နှင့်သို့မဟုတ်ကျွန်ုပ်တို့ကိုစိတ် ၀ င်စားသည့် format ဖြင့် download လုပ်ပါ အဖြစ်လမ်း သင်၏ကိုယ်ပိုင် WebAPP ကိုဖန်တီးပါ သင်၏ Android Desktop ပေါ်တွင်တိုက်ရိုက် ၀ င်ရောက်နိုင်ရန်နှင့်သင်၏ Android တွင်တပ်ဆင်ထားသည့်အခြားအပလီကေးရှင်းတစ်ခုအနေဖြင့်ဝက်ဘ်စာမျက်နှာကိုကြည့်ရှုနိုင်ခြင်း။ ဒါကြောင့်ငါကအရမ်းအသုံးဝင်လိမ့်မည်ဟုထင်သောကြောင့်ကြည့်ရှုရန်သင့်အားအကြံပေးသည်။
အလိုရှိ အရည်အသွေးမြင့်သောဂီတကို 320 kbps ဖြင့် download လုပ်ပါ? ငါတို့သည်သင်တို့ကိုစွန့်ခွာခဲ့သော link ကို၌သင်တို့ကိုလုပ်ဖို့အခြား app ကိုရှာဖွေတွေ့ရှိလိမ့်မည်။
ဆောင်းပါး၏လမ်းကြောင်းအပြည့်အစုံ - Androidsis ပါ » လဲ tutorial » အမြင့်ဆုံးအသံအရည်အသွေးဖြင့်တေးဂီတကိုဒေါင်းလုပ်လုပ်နည်း။ FLAC !!
Ernst Manuel Garcia Wettstein ဟုသူကပြောသည်
Ernst Manuel Garcia Wettstein ကိုပြန်ပြောပါ
Wilmer Gom Santos ဟုသူကပြောသည်
ကျေးဇူးတင်ပါတယ် =) ။
Wilmer Gomes Santos သို့ပြန်သွားပါ
Luis Brun ဟုသူကပြောသည်
သူငယ်ချင်းများ - ဂီတတစ်ခုတည်း၊ ကြော်ငြာမပါ၊ ပြတ်တောက်ခြင်းမရှိ၊ အရည်အသွေးမြင့်ဂီတပရိုဂရမ်းမင်းသာအင်္ဂလိပ်လိုသာပေါ့။ လက်ရှိပေါ့ပ်ပေါင်း ၈၀ နှင့် ၉၀ တို့၏ဂန္ထဝင်များသည်စုံလင်သောပေါင်းစပ်မှုဖြစ်သည်။ စီးပွားရေး၊ အိမ်၊ ရုံးသို့မဟုတ်မော်တော်ယာဉ်များအတွက်သင့်တော်သည်။ Radio GOOD MUSIC FM FM buenamusicafm.com
Luis Brun ကိုပြန်ပြောပါ
Boxing Star သည်ရက်စက်ကြမ်းကြုတ်သည်။ ကမ္ဘာ့လက်ဝှေ့ချန်ပီယံဖြစ်လာရန်တိုက်ပွဲဝင်သည်